Le nkampu isanda kulungiswa isembindini we-Elk Country. I-Elk Country Lodging yinkampu yabucala ebekwe ecaleni kohola wendlela odlula e-Elk Country kwaye iyafumaneka ukuba ungayirenta ngeholide yosapho lwakho unyaka wonke. Le nkampu imi kumgama oziikhilomitha ezili-9 kuphela ukusuka kwiZiko lokuJonga i-Elk. I-Elk kunye nezinye izilwanyana zasendle zihlala zityelela inkampu.
Ikhitshi eyenziwe nge-Amish ine-granite countertops, inkunkuma yokulahla inkunkuma, i-dishwasher, i-microwave, i-K-cup maker yekhofi, iipleyiti, izitya, iimbiza, iipani, njl. umgangatho. Phezulu kukho amagumbi okulala amathathu (3) (igumbi lokulala eli-1 - ubukhulu obugcweleyo, igumbi lokulala eli-2 - eligcweleyo, igumbi lokulala 3 - 2 iibhanti ezingamawele ze-XL) kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo phezulu. Kukho i-queen size inflatable umatrasi kunye ne-twin size inflatable umatrasi yeendwendwe ezongezelelweyo ezibekwe kwigumbi lokulala. Kukho ubushushu obuninzi kwiinyanga zasebusika kunye ne-air conditioning esembindini kwiinyanga zasehlotyeni. Ngaphandle yiveranda egcweleyo engaphambili ukuze uthathe umbono wenduli. Kwakhona, ngaphandle kukho izitulo, i-fire ring, kunye ne-marshmallow/hot dog sticks zokuphumla ebusuku malunga nomlilo wenkampu.
Uza kubona i-elk elk kunye namaxhalanga anyukayo kodwa ungalibali iivenkile ezininzi, ii-wineries, iindlela zokuhamba, i-kayaking kunye nokuloba emlanjeni, iindwendwe kunye namaziko okubukela kumgama okufutshane. Ukuba uzimisele ukuthatha idrayivu, sicebisa ukuba undwendwele iBhulorho yaseKinzua, iiPaki zoMbuso, intengiso yonyaka yeekhilomitha ezili-100, njl.
Singaqhagamshelwana ne-24/7 xa ufuna.